DAAWO: Maxamed Salaax oo ku guuleystay ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC
Ciyaaryahanka reer Masar ee Mohamed Salaax oo ku guuleystay codeynta ciyaaryahanka Afrika sanadka ee BBC ee 2017-ka.
Wararkii u dambeeyey ee Ciyaaraha Kubadda Cagta
Laacibka khadka dhexe uga dheella Manchester United, Paul Pogba, ayaan ciyaari doonin kulanka adag ee soo socda.
Qiiq fara badan oo wasakheeyey hawada caasimadda India ee Delhi ayaa hakad galiyey cayaar Cricket ah oo dhex maraysay India iyo Srilanka, ka dib markii ay cabasho ka timid kooxda Srilanka.
Maraykanka oo ka baaraandagaya aqoonsiga Jeruselam
Saraakiil Maraykan ah ayaa sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu aad u danaynayo in magaaladda Jerusalem loo aqoonsado caasimadda Isare'il.
Isku-aadka Koobka Aduunka
Isku-aadka kooxaha ka qaybgalaya tartanka kubadda cagta aduunka ayaa u muuqda mid kooxaha la isku aadiyay ay si weyn u kala duwan yihiin.
Maxay kooxda England ka filaysaa Koobka Aduunka ?
Tababaraha kooxda England Gareth Southgate ayaa sheegay in kooxdiisa aysan koobka dunida iska aadi doonin iyadoon aan wax guullo ah ka keenin
Wayne Rooney oo dhaliyay 'mid ka mid ah goolashiisa ugu quruxda badan'
Wayne Rooney ayaa gool qurux badan ka dhaliyay laad uu ka ganay qaybtii ay kooxdiisu garoonka kaga ciyaaraysay - taas oo ahayd gooshii saddexaad ee uu Everton u dhaliyay intii ay ciyaartu socotay.
Tababaraha Chelsea oo raaligalin bixiyay
Tababaraha Chelsea Antonio Conte ayaa raaligaliyay garsoore Neil Swarbrick ka dib markii ciyaar looga saaray in uu ku madaaharaaday garsooreyaasha.
Tababaraha Liverpool oo ka carooday garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaartii dhexmartay Liverpool iyo Chelsea
Tababraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa sheegay inuu ka carooday garsoorihii dhexdhexaadinayay ciyaartii xalay dhexmartay Kooxaha Liverpool iyo Chelsea, kaddib markii kooxdiisa ay u surtageli weyday isbedel ay doonayeen inay ku sameeyaan mid kamid ciyaartoyda, kahor inta aanu Willian goolka u dhalinin kooxda Chelsea.
26 Nofembar 2017
Serena Williams oo guursatay Alexis Ohanian
Serena Williams ayaa guursatay Alexis Ohanian oo wax ka aasaasay Reddit, iyaga oo dhigtay mid ka mid ah aroosyadii ugu waawaynaa ee sannadkan.
Borussia Dortmund oon safaynin Pierre-Emerick Aubameyang arrimo anshax
Kooxda Borussia Dortmund ayaan soo safaynin ciyaaryahan kooda afka hore uga dheella ee Pierre-Emerick Aubameyang sababo anshax la xiriira.
Denmark oo indhaha isugu qabatay riyadii Ireland
Jamhuuriyadda Ireland ayaa ku guuldarraysatay in ay ka qayb gasho Koobka Adduunka ka dib markii saddex gool oo uu dhaliyay Christian Eriksen ay Denmark u suuragalisay in ay guul muhiim ah gaarto.
Liam Miller oo ah ciyaaartoy horray ugu soo dheelay Celtic iyo Manchester United ayuu Kansar ku dhacay.
Hadalhaynta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
Halkan ka akhriso wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
Ciyaaryahannada u tartamaya abaalmarinta BBC ee laacibka Afrika oo la shaaciyay
BBC ayaa shaaca ka qaaday liiska shanta ciyaartoy ee isagu soo haray abaalmarinta BBC ee ciyaaryahanka kubadda cagta ee ugu wanaagsan Afrika ee sanadka 2017.
SADIO MANE: Cayaaryahanka xulka Senegal iyo kooxda Liverpool
Xiddiga uu dheelo xulka Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa ka mid noqday shanta ciyaaryahan ee ku tartamaya ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC-da.
Naby Keita wuxuu ka mid yahay shanta ciyaartooy ee ku tartamaya abaalmarinta ciyaaryahanka sanadka Afrika ee BBC